မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Pneumatic Actuator > နှစ်ချက် ခေတ္တ Pneumatic Actuator > မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator
AOX-P ကို ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r ရှိ မြင့်သော အရည်အသွေး နှင့် ရှည်လျားသော ဘဝဖြစ်စဥ် သို့ တှေ့ဆုံ အဆိုပါ အခင်အရှင် auသို့mation market.AOX ရဲ့ AOX-P ကို ကို စီးရီး မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuaသို့r အစေခံ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, အပါအဝင် ဥရောပ, အဆိုပါ အမေရိကတိုက်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အဆိုပါ အလယ်တန်း အရှေ့ နှင့် Souအဆိုပါast အာရှ နိုင်ငံပေါင်း။ ဒါဟာ ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, heatတွင်g, ရေနံ, ဓါတုဗေဒ တွင်dustry, အီလက်ထရွန်းနစ်, အလင်း တွင်dustry, အစားအစာ, medicတွင်e, အထည်အလိပ်, စက္ကူ makတွင်g, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, smeltတွင်g, အသစ်က အင်အား နှင့် oအဆိုပါr လယ်ကွင်း။
AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏လေကြောင်းထောက်ပံ့ရေး interface ကိုနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator NUMAR စံနှင့်အညီတည်ဆောက်ထားသည်။ အဆိုပါ interface ကိုရန် NUMAR solenoid အဆို့ရှင်ကိုတိုက်ရိုက် install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။
AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator များအတွက် 3. Fastener ။
အဆိုပါလေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖိအားလေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) အနေဖြင့်နှစ်ဦးကို piston အကြား AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့ဆလင်ဒါကိုယ်တည်းထဲသို့ကြွလာနှင့်ဆလင်ဒါကိုယ်ခန္ဓာ၏အဆုံးဆီသို့ piston တွန်း။ အဆိုပါ piston နှင့်ဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်အကြားလေကြောင်းလေကြောင်းဝင်ပေါက် (4) မှဖြန့်ချိသည်။ လေထုအရင်းအမြစ်ဖိအားလေကြောင်းဝင်ပေါက် (4) ကနေဆလင်ဒါခန္ဓာကိုယ်ကြီးစွန်းသို့ကြွလာခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိနှစ်ခု piston အကြားလေကြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားဘက် piston တွန်းလျှင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပင် piston ၏ထိန်သိမ်း, တစ်ပြိုင်နက် output ကိုရိုးတံ anticlockwise (ဂီယာဘီး) ကိုလှည့် လေကြောင်းဝင်ပေါက် (2) မှစ. , output ကိုရိုးတံ (ဂီယာဘီး) လက်ယာရစ်လှည့်ရန်တစ်ပြိုင်နက် piston ၏ထိန်သိမ်းခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်မည်ဖြစ်သည်။ (ထို piston တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေကွဲပြားခြားနားသောဦးတည်ချက်အတွက်စုဝေးနေကြသည်လျှင်, output ကိုရိုးတံအမည်ရနှစ်ဆသရုပ်ဆောင် DLtype reverse, ပြောင်းပြန်ဦးတည်လှည့်ထွက်လှည့်လိမ့်မယ်)
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator တိုင်းထုတ်လုပ်ဇာတ်စင်မှာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းသေချာစေရန်တစ်ဦးပြည့်စုံထုတ်ကုန်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးစနစ်အားရှိသည်။
2. အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, အချိန်မီအာရုံစိုက်, လျင်မြန်စွာ, ရိုးရှင်းသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုအမိန့်တုံ့ပြန်မှုသေးငယ်တဲ့အမိန့်ကိုလက်မခံ, လျင်မြန်စွာ UPS, DHL, TNT မှတဆင့်တင်ပို့နိုင်ပြီးဖောက်သည်လည်းပင်လယ်, လေနှင့်အခြားနည်းလမ်းများအားဖြင့်တင်ပို့ဖို့ရှေးခယျြနိုငျသညျ။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
Q: မဆိုအသိအမှတ်ပြုသွင်းကုန်၏မရှိဘဲ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator အမိန့်ပေးနိုင်သနည်း
Q: ပြီးနောက်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ပေးပို့သင့်ရဲ့ quotation အများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုခံယူနိုငျသောအခါငါသည်သင်တို့၏ AOX-P ကိုစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်နှစ်ဆသရုပ်ဆောင် pneumatic actuator စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါက?
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် နှစ်ဆ သရုပ်ဆောင် pneumatic actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်